De Jong oo ka warbixiyay sababta uu u doortay maaliyada lambarka 21-aad, muxuuse ka yiri Griezmann? – Gool FM
(Spain) 21 Luulyo 2019. Xiddiga dhawaan galka ah ee kooxda Barcelona Frenkie de Jong ayaa xaqiijiyay sida uu ugu baahan yahay barashada luqada Isbaanishka ah, si uu ula falgalo sida ugu dhaqsida badan saaxiibadiis garoonka Camp Nou.
Dhinaca kale xiddiga reer Holand ee Frenkie de Jong ayaa sheegay inay la mid tahay sida inuu joogo gurigiisa, maadaama uu caawin ka helay qof walba ee ku sugan kooxda Barcelana.
Frenkie de Jong ayaa wuxuu ugu horeyn ka hadlay sababta uu u doortay maaliyada lambarka 21-aad wuxuuna yiri:
“Wax dhib ah kuma qabo haddii aan xirto lambar kale, laakiin haddii ay taasi suurtogal tahay, waa lambar khaas ii ah, sababtoo ah dhalashada awoowgeey waxay ku beegneyd 21-kii Abriil, wuxuuna geeriyooday hal sano iyo bar ka hor”.
“Wuxuu ahaa lambar aan ka helay aniga ahaan noloshayda xirfadeed, tan iyo markii aan bilaabay inaan si xirfad leh ugu ciyaaro kooxda Ajax waxaan xirtay maaliyada Lambarka 21-aad”.
Intaas kaddib Frenkie de Jong ayaa wuxuu amaanay heshiiska uu Antoine Griezmann ku yimid kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Waa ciyaaryahan cajiib ah, waa mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka, wuxuu xoojin fiican u yahay kooxda”.
Yeelkadeeda, Frenkie de Jong ayaa wax laga weydiiyay guuldaradii niyadjabka ahayd ay kooxda Barcelona kala soo laabatay garoonka Anfield, kulankii ay Liverpool ku wada ciyaareen lugta 2-aad wareega afarta ee Champions League ee xili ciyaareedkii tagay.
“Uma maleynayo inay iloobeen wixii ka dhacay garoonka Anfield, laakiin waxay noqoneysaa doqonimo inaad wali noqoto mid ka murugeysan wixii dhacay”.
“Dabcan, waan murugeysanahay markaan laga hadlayo arrintan, laakiin waa si la mid ah waxa ay Ajax kala kulantay Tottenham, waana inaan horey uga sii soconaa”.
“Xilli ciyaareedka soo socda waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano tartamada oo dhan, sidaasi darteed waa inaan noqonaa kuwo fiican, sidoo kalena waa inaan diirada saarnaa, isla markaana aan iska iloownaa guuldarooyinkaas”.